राजाको ‘हुकुम’ रोल्पा कि रुकुम ? – Mero Film
राजाको ‘हुकुम’ रोल्पा कि रुकुम ?
२०७५ साउन ९ गते १६:४४
पहिले पहिले राजा महाराजाहरुको शासन हुदाँ दरबार भित्र वा बाहिरका व्यक्तिहरुलाई कुनै कार्य सम्पादन गरेको खुसियाली मनाउन राजाले कुनै स्थानको जमिन वा राज्य उपहार स्वरूप प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको थियो । त्यही प्रचलनको भावलाई प्रेममय परिवेशमा ढालेर सुरेश अधिकारीले कोरेको शब्द तथा उनकै संगीत रहेको फिल्म ‘सुश्री सम्पति’ गीत ‘हुकुम’ सार्वजनिक भएको छ । बिशाल राई र मेलिना राइको स्वर रहेको उक्त गीतका नायक द्वय सलोन बस्नेत र बिनोद न्यौपानेका साथमा नायिका सारा सिर्पाली फिचर्ड छन् । यस गीतको भिडियोमा गम्भीर बिस्टको कोरियोग्राफी र शिवराम श्रेष्ठको छायाङ्कन रहेको छ ।
‘सुश्री सम्पति’मा प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, विशारद बस्नेत, सुनिता श्रेष्ठ ठकुरी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ भने यसमा प्रियंका कार्की अतिथि भूमिकामा देखिनेछिन् । रमेश त्वायना प्रस्तुतकर्ता रहेको ‘सुश्री सम्पत्ति’ को कथा निर्देशक शुब्रत आचार्य आफैले लेखेका हुन् । फिल्मको निर्मातामा विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रमन सिलाकार रहेका छन् । अभिमन्यू निरवी र निर्देशक आचार्यको डाइलग रहेको फिल्मको स्क्रिनप्ले अभिमन्यूकै रहेको छ ।
फिल्म भद्र २२ मा रिलिज हुने भनिए पनि रिलिज डेट सर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक शुब्रत आचार्यले राम्रो फिल्म छ भने त्यसको लागि उचित डेट हेर्नु पर्ने भन्दै घुमाउरो पारामा रिलिज डेट सर्न सक्ने सम्भावना देखाएका थिए । उनले भने, ‘हामी कुनै फिल्मको थ्रेट वा अन्य केही कारण नभई राम्रो मेहनत गरेको फिल्मलाई उचित डेटमा रिलिज गर्नु पर्छ भन्ने मनस्थितिमा छौँ ।